Global Voices teny Malagasy » Shina: Sary Maneho ny Fijalian’ireo “Ankizy 58 Tapitrisa Nilaozana” · Global Voices teny Malagasy » Print
Shina: Sary Maneho ny Fijalian'ireo “Ankizy 58 Tapitrisa Nilaozana”
Voadika ny 20 Aogositra 2017 8:10 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fanabeazana, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Tanora, Zon'olombelona
(Fanamarihana : lahatsoratra nivoaka tamin'ny 16 Novambra 2011)
Niteraka sahotaka tao amin'ny aterineto ny sarin'ilay zazavavy kely nitondra ilay anadahikeliny mbola zaza tany an-tsekoly tany Shina tamin'ny volana lasa (Oktobra 2011). Taratry ny olana ara-tsosialy hatry ny ela eo amin'ireo ankizy nilaozan'ireo ray aman-dreniny any ambanivohitra izany.
Nofafàna tao amin'ny sehatry ny serasera amin'ny aterineto ilay adihevitra ary voasivana sy nanjavona tamin'ny sehatra lehibe ifaneraseràna amin'ny aterineto toy ny Sina, Baidu ary ny Sohu ilay tenifototra hoe ” te-hatory ilay anadahikely” (弟弟要睡了), nanomboka tamin'ny 7 Novambra 2011, satria miha-mivadika resaka politika hatrany ilay adihevitra. Vinavinaina ho 58 tapitrisa eo ho eo ireo “ankizy nilaozana” any Shina.
Te-hatory ilay anadahikely
Long Zhanghuang no anaran'ilay zazavavy kely 10 taona ao amin'ny sary [zh], Zhang Junjie kosa ny an'ilay anadahikeliny roa taona. Mpiasa avy any ambanivohitra nifindra monina hiasa any an-tanàndehibe ny ray aman-dreniny ary ao amin'ny raibeny sy ny renibeny izy dahy ireo no mipetraka. Any amina tanàna kely any amin'ny faritr'i Fenghuang, faritanin'i Hunan no misy ilay lakilasy.
“Te-hatory ilay anadahy kely”. Sary avy amin'i Mian Qu, mpisera amin'ny Sina Weibo. Hita amin'ny sehatra ho an'ny daholobe ihany koa.
Hazavain'i Shichengke [zh], mpitoraka bilaogy, ny hevitra manodidina ny ara-tsosialy sy ny ara-politikan'ilay sary :
“Te-hatory ilay anadahy kely” dia zavatra nakelezina, fanoharana ary fanontaniana. Ny hamafin'ny zava-misy any ambanivohitra izay mijaly noho ny faharavàna ateraky ny rafitra fanoratana ny tokantrano sy ny tsy fahalavorarian'ny fiahiana/filaminana ara-tsosialy no asehony.
Hazavain'ilay  mpanao fanadihadiana amina haino aman-jery, Yanlong, amin'ny antsipirihiny [zh] ny ilàna ny fanavaozana ny fiahiana ara-tsosialy :
Marina fa tsy ny momba ny zo hatory no olana mianjady. Tsy tafapàka any amin'ny fiarahamonina fototra ny rafitra fiahiana ara-tsosialintsika. Lasa zara raha resahana ny fiahiana ny ankizy, indrindra fa ireo any amin'ny tanàna ambanivohitra mahantra. Miankina indrindra amin'ny vola miditra amin'ny fianakaviana ny fisitrahan'ny ankizy ny tombontsoa. Na tsy mihatra any amin'ny tanàna ambanivohitra aza ny fahapotehana ara-toekarena, dia efa tsy manana fotoana loatra hikarakaràna ny zanany intsony ireo ray aman-dreny ; tsy azo ihodivirana ny tantara mampalahelo tahaka ny [amin'ny sary].
Tsinontsinoavina ihany koa ny zon'ireo raibe sy reniben'ity zazavavay kely ity hisitraka ny fisotroan-drononony. Tsy mitovy amin'ireo any an-tanàndehibe, tsy mba misy taona handehanana misotro ronono ny any ambanivohitra satria tsy ampy ny fiarovana amin'ny fiahiana ara-tsosialy. Tsy maintsy mikarakara ny fambolena ny taniny ry zareo na dia efa tena antitra aza. ” Tsy manana olona hianteherana ireo ankizy raha ireo zokiolona kosa tsy mahita olona hanome hanina azy ireo”- izany no hafatra mampalahelo alefan'ity sary ity.
‘Zaza 58 tapitrisa nilaozana’
Ho tohin'ny tantara dia nandefa ekipa mpanao lahatsary tany amin'ilay tanàna ny QQ news, izay namokatra tatitra fanadihadiana [zh] tena mahatohina (miaraka amin'ny dikateny Anglisy).
Nahasarika fanehoankevitra maherin'ny 5.200 ilay lahatsary fanadihadiana. Ireto ambany ireto ny ireo dika malaza indrindra voafantina :
Dark spirit : Maneho ny tebitebiny amin'ireto ankizy nilaozana ireto ny fiarahamonina ary manome tsiny ny ray aman-dreny. Nefa, fantatry ny fiarahamonina ve ny tontalin'ny vola miditra ao amin'ireo fianakaviana ireo ? Mahavita ny fiainan'ny fianakaviana sy hampianarana ny ankizy ve izany raha tsy miasa any an-tanàndehibe [ny ray aman-dreny ] ? Mitohy milaza ny tebiteby foana ny fiarahamonina, fa tsy misy soso-kevitra mitondra fanatsaràna na iray aza.
Stubborn stone : Mpiasa maro mpifindra monina avy any ambanivohitra no mandray anjara amin'ny fanorenana tanàndehibe sy fivoarana ara-toekarena, mba hahafahana miaina. Nefa, vokatry ny hadisoan'ny politikan'ny governemanta sy ny fanapahankevitra ôfisialin'ny fitantanana ny tanàna dia tsy afaka manaraka ny ray aman-dreniny sy hisitraka ny fianarana any an-tanàndehibe ireo ankizy ireo. Tsy mbola niatrika karazana olana tahaka izany mihitsy ireo mpiasa ao amin'ny governemantatsika, tsy maintsy mandini-tena ry zareo
Sesame mud ): Aza tsiniana ny ray aman-dreny, miezaka araka izay heriny ry zareo mba hivelomana sy hanohanana ny zanany. Tsy te-hiala ny tranony sy hirenireny ry zareo. Nefa noho ny tsy fisian'ny politika tsara ho an'ny faritra ambanivohitra sy fanohanana ny fambolena, dia tsy azo hivelomana maharitra ny any ambanivohitra. Tsy afaka na dia ny miaina (mifoka rivotra ) aza ny olona noho ny fisondrotry ny vidim-piainana sy ny fidangan'ny vidin'ny fanànana sady miha-sarotra hatrany hatrany ny miaina any ambanivohitra. Ny governemanta no tsy maintsy tsiniana noho ny zamavisy iainan'ireo ankizy anaty fahantrana. Tsy maintsy mandray ny andraikiny ihany koa ny governemanta isam-paritany sy ny governemanta ao an-toerana. Aza miteniteny foana hoe misy olona marobe mila fanampiana, tokony hanampiana izay olona mila izany ny volan'ire mpandoa hetra. Isan'ny midangana indrindra manerantany ny hetrantsika. Tokony havelantsika hanana fiainana tsara kokoa sy hiaina miaraka amin'ny ray aman-dreniny ny ankizy.
Asongadin'ilay  mpanangom-baovao, Fu Jianfeng [zh], ny fitanisàna ny tenin'ilay mpampianatra momba ilay ampahan-tantara tao an-dakilasy ao anatin'ilay lahatsary :
Nikiakiaka mafy ilay ankizy : ” Halako ny lohataona.” Nanontanian'ilay mpampiantra azy ny antony. ” Rehefa lohataona, tsy maintsy mandeha miasa ny ray aman-dreniniko. Tsy miverina ry zareo raha tsy ririnina”, hoy izy. Resaka niseho tao amin'ilay tanànan'ny ” Te-hatory ilay anadahikely” izany. Nanganohano aho nijery ilay lahatsary . Izany no manjo ireo ankizy 58 tapitrisa nilaozana. Tsy maintsy fenoin'ny fiarahamonina sy ny firenena ny banga amin-dry zareo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/20/104715/
 sary : http://q.weibo.com/761545/status/b4EYmFxNK?source=weibofeed
 Hazavain'i : http://news.ifeng.com/opinion/society/detail_2011_10/24/10091700_0.shtml
 tatitra fanadihadiana : http://news.qq.com/photon/record/thestay.htm#